Wiricheya Isina Mvura - Wiricheya Yekugeza
A chigaro chisina mvura dzimwe nguva inonzi wiricheya yekugezesa, yakagadzirirwa kushandiswa pakugeza kana kugeza. Chimwe chezvinonyanya kukosha chechigaro chisina mvura inyaya yekuti havatore zvinwiwa. Most zvigaro zvisina mvura kana shawa havana chero mhando yejira jira, nekuti inoshandiswa mumvura, haigone kuve nerudzi rwechinhu chinotora mvura.
Kubatsira kukuru kwekuva nerudzi rwechigaro ndechekuti mushandisi anogona kuchinjirwa kuchigaro kubva kune imwe nzvimbo, uyezve vanogona kupinda mushawa vasina kugara chinja matambudziko aiwanzo sangana nerudzi urwu rwekuchinjisa. Rudzi rwechigaro runogona zvakare kushandiswa kutenderedza padziva kana padyo nemuviri wemvura. Izvo hazvizokuvadzwa nekuti zvakagadzirirwa kunyorova pane imwe nguva. zvose mawiricheya asina mvura ari manyorero, wiricheya ine simba haigone kushandiswa munzvimbo dzakanyorova, sezvo dzisina kugadzirwa kuti dzinyorove.
6 Mazano eIzhizha Ekudzoreredza Zvakachengeteka muWiricheya
Kushambidza Kwakachengeteka neShower Wiricheya
Shower Sachigaro Sarudzo Yekutungamira
Shower Wiricheya Inopa Shower Munyaradzo